Wararka Maanta: Sabti, May 19, 2012-Diyaarad ay leedahay Turkish Airways oo mar kale fariisan waday Garoonka Muqdisho iyo maamulka Garoonka oo Arrintaas ka hadlay
Agaasimaha waxaada duulista Soomaaliyeed Cali Maxamuud Ibraahim oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in diyaaraddu ay mar kale fariisan waday garoonka muddo toddobaad gudihiiis ah, isagoo meesha ka saaray inuu ka dhashay muran u dhexeeya iyaga iyo shirkadda diyaaradda iska leh.
"Diyaaraddu sababo maamulkooda la xiriira ayay u cago-dhigan waday garoonka, mana jiraan wax khilaaf ah oo sababay inay garoonka ku degi waday," ayuu yiri Cali Maxamuud.
Sarkaalkan wuxuu sheegay in duuliyaha diyaaradda uu diiday inuu kasoo dego dhinaca dekedda Muqdisho, isagoo sheegay buu yiri in maamulkooda uusan taas ogoleyn, ayna tahay sababta ay ugu degi waday diyaaraddu shalay oo Jimco ahayd garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
"Khilaaf horay ugu dhexeeyay shirkadda Turkish Airlines iyo maamulka garoonka waa jiray, wuxuuna ku saabsanaa lacagaha garoonka looga qaado diyaaradaha, taasna waa la xalliyay oo shirkadda ayaa ogolaatay inay bixiso lacagtaas," ayuu yiri madaxa saadaasha hawada ee garoonka Aadan Cadde.
Diyaaraddii Turkish Airlines ee cago-dhigan wayday garoonka Muqdisho ayaa ku dagtay garoonka diyaaradaha ee Nairobi, iyadoo dib ugu duushay dalka Turkiga oo ay markii hore ka timid.
Sidoo kale, Arbacadii lasoo dhaafay ayay diyaaradda Turkish Airlines fariisan waday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, iyadoo ku dagtay garoonka Addis Ababa dibna ugu laabtay dalka Turkiga.
Turkish Airlines ayaa noqonaysa diyaaraddii ugu horreysay oo duulimaadyo caalami ah ku timaadda Muqdisho, iyadoo aan la ogeyn saameynta ay duulimaadyadeeda ay ku imaanayso Soomaaliya ku yeelan karaan sababihii keenay inay laba jeer fariisan waday garoonka diyaarada Muqdisho.